février 2021 – Ministère de la Jeunesse et des Sports
CONFEJES – FIVORIAMBE FAHA-38 NY MANAMPAHAIZANA MANOKANA MOMBAN’NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA
Nanomboka ny 23 febroary ary hifarana ny 25 febroary 2021 ny fivoriana iarahan’ireo tompon’andraikitra lehibe avy amin’ny firenena mpikambana ao anatin’ny CONFEJES izay tanterahina any Ouagadougou, Burkina Faso.
CONFEJES – FIVORIAMBE FAHA-38 NY TOMPON’ANDRAIKITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHATENA AMIN’NY FIRENENA MITENY FRANTSAY
Toy ny fanao isaky ny 2 taona dia hanatanteraka fivoriana faha-38 ny Confejes manomboka anio faha 23 febroary 2021 ka hatramin’ny faha 27 febroary 2021. Any Ouagadougou, Burkina Faso no hanatanterahana izany. Ny fivoriana dia hotanterahina amin’ny endrika ampitain-davitra ho an’ny firenena sasany noho ny antony ara-pahasalamana mahakasika ny Covid-19. Amin’ny maha-mpikambana feno an’i Madagasikara eo anivon’ity rafitra ity, dia mandray anjara mavitrika amin’ny programan’asa rehetra izay hatao isika. Ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON sy ny Tale jeneraly misahana ny fanatanjahantena, Rosa RAKOTOZAFY no hanatrika izany fivoriana izany.
FITSENANA IREO LOHOLONA TAO TOLIARA
Tonga tao Toliara omaly Alahady faha 21 Febroary 2021 ireo Loholon’i Madagasikara izay lany tao anatin’ny Faritany Toliara, dia Andriamatoa Ongombelo Marcel, Andriamatoa Rakotomamonjy Neypatraiky sy Andriamatoa Richard Tsiebo Mahaleo ary ny Filoha Lefitra ny Antenimieran-doholona ao amin’ny tapany Atsimo Andriamatoa Nicolas Rabemananjara.